बेसारवाट हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने औषधी उपायहरु
बेसारको वानस्पतिक नाम ‘करक्यूमा लोगा’ हो । नेपालमा सदियौंखि ऋषिमुनिहरूले यसको प्रयोग एक औषधिका रूपमा गर्दै आएको र आयुर्वेदमा यसको गुणहरूको पर्याप्त बयान गरेको पाइन्छ । विशेष गरी बेसार दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एसियाको कन्दमूल हो तर आज विश्वका सम्पूर्ण देशहरूमा यसको प्रयोग हुने गर्दछ । बेसारमा हुने ‘कुरकुमिन’ नामक जैविक रसायनका कारण नै बेसार […]
हामीलाई राम्रो निन्द्रा नपर्दा शरीरमा यस्ता समस्या देखिन्छन्
स्वस्थ्य जीवनका लागि हावा, पानी र खाना जति अत्यावश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ निन्द्रा । निन्द्राको माध्यमबाट रातको समय शरीरले विश्राम गर्ने हो । दैनिक सातदेखि आठ घण्टासम्म मस्त सुत्नुपर्ने बताइन्छ तर विभिन्न कारणले मानिस निदाउन सक्दैनन् । यसमा शारीरिक तथा मानसिक कारणले भूमिका खेल्छन् । जब हामी शारीरिक वा मानसिक रूपले रोगी हुन्छौँ, […]
राम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने बेसारका फाइदाहरु
हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने बेसार मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी एशियामा हजारौं वर्षदेखि प्रयोगमा आएको छ यो विभिन्न रोग तथा चोटपटकको उपचारमा समेत उपयोगी मानिन्छ । अझ आयुर्वेदमा यसलाई सबैभन्दा उपयोगी प्राकृतिक एन्टिबायोटिक मानिन्छ । फाईदाहरु एक अध्ययनले प्रमाणित गरे अनुसार टाउको र घाँटीमा क्यान्सर वृद्धि गर्ने इन्जाइमलाई बेसारमा पाइने सर्कुमिन नामक मुख्य तत्वले रोक्छ । यसका […]
हाम्रो यस्तो बानीले गर्दा मस्तिष्क खराब हुनसक्छ
दिनभरिको क्रियाकलापका क्रममा हामीहरूले गर्ने गल्तीले मस्तिष्कमा खराब असर पर्छ । निद्राको कमी शरीर तथा मस्तिष्कको समग्र विकासका लागि पर्याप्त मात्रामा निद्रा आवश्यक छ । मस्तिष्कलाई ताजा र स्वस्थ्य राख्न दिनहुँ ७ वा ८ घण्टाको गहिरो निन्द्रा लिनुपर्छ । बिहानको नास्ता नखाने बानीले बिहान समयमै नास्ता नलीदा लामो समयसम्म रगतमा ग्लूकोज को मात्र कमहुन पुग्छ […]
विवाहित महिलामाथि पुरुषले आँखा लगाउनुका कारणहरु
विवाहित महिलामाथि पनि पुरुषले आँखा लगाउछन् भन्ने कुराले तपाईलाई रिस उठ्छ हाला, तर आजभोलि यस्ता घटना देखिएका छन् । आजभोलि धेरै पुरुष विवाहित महिलाप्रति आकर्षक हुने गरेका छन् । यो पछिल्लो समय भएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । उक्त अध्ययनले यसो हुनुका कयौँ कारण पनि बताएको छ । आखिर किन विवाहित महिलाप्रति पुरुष बढी आकर्षित […]
कोलस्ट्रोलको मात्रा घटाउने उपायहरु
मानव शरीरमा कोलस्ट्रोलको मात्रा अत्याधिकभयो भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । रगतमा कोलस्ट्रोल बढ्नु मुटुका लागि हानिकारक मानिएको छ । यसका अलावा क्यान्सरका लागि झनै घातक सावित भएको छ । जानी राखौं रगतमा कोलस्ट्रोलको मात्रा घटाउन कस्तो खाद्य पर्दाथ खानु पर्दछ जसबारे तल उल्लेख गरिएको छ । शाकाहारी खानापान कोलस्ट्रोल हटाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो […]
होसियार ! राती सुत्ने समयमा कदापी यी कामहरु नगर्नुहोस्
राती सुत्ने समयमा गर्न नहुने कार्यहरु मध्ये एक चुरोट सेवन हो । चुरोटमा निकोटिन हुने हुनाले यसले निन्द्रालाई धेरै नै प्रभाव पार्दछ । निकोटिन शरीरमा प्रवेश गरेपछि धेरै लामो समयसम्म असर गर्दछ र निन्द्रा नलाग्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तैगरी अर्को रक्सी सेवन पनि हो कतिपय मानिसहरुले चिन्ता कम गर्नको लागि र निन्द्रा लागेन भने […]
स्वादिलो चिकेन चाउमिन बनाउने तरिकाहरु
फास्ट फुड खान मन पराउनेहरुका लागि चिकेन चाउमिन स्वादिष्ट परिकार हो । तर, अत्यधिक र अस्वस्थ तेल तथा अन्य सामग्रीको प्रयोगले जस्तोसुकै ठाउँमा पनि खाँदा यसले बिमार निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यसलाई स्वस्थ र सफा तरिकाले घरमा नै बनाउन सकिन्छ । चाउमिन बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री नुडल्स, कुखुराको मासु, बन्दा, क्याप्सिकम, गाँजर, अदुवा, लसुन, प्याज, […]
थालासेमिया भएका व्यक्तिले खान हुने र नहुने कुराहरु ?
थालासेमिया रोगमा हुने फलाम तत्वको अधिकता रगत ट्रान्स्फ्युजनको कारणले हुन्छ तर बिरामीले खाएको खानाबाट शरीरले अवशोषण गर्ने फलाम तत्व पनि महत्वपूर्ण छ । खानाबाट हाम्रो शरीरमा सानो मात्रामा फलाम तत्व अवशोषित हुन्छ । यदि रगतमा हेमोग्लोबिनको तह कम छ भने अवशोषित हुन्छ । यदि रगतमा हेमोग्लोबिन तह कम छ भने अवशोषित फलाम तत्वको मात्रा उच्च […]
गर्भवती महिलाहरुले गर्भावस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
गर्भावस्थाका मुख्य लक्षणहरु थकाइ लाग्ने वा जिउ गल्ने शरीरमा ज्वरो आएजस्तो लाग्ने कुनै खानेकुरा धेरै खान मन लाग्ने वा खानै मन नलाग्ने बारम्बार पिसाव लाग्ने स्तन गानिएर आउने, ठूलो हुने ढाड (तल्लो भाग) दुख्ने गर्भ रहेपछि हल्का रक्तश्राव हुने टाउको दुख्ने दिक्क लाग्ने वा तनाव हुने बिहान उठ्ने बित्तिकै बिरामी हुने गर्भावस्थाका शारीरिक परिवर्तनहरु पहिलो […]
हाम्रो कलेजो स्वस्थ राख्ने उपायहरु
कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंगमध्ये एउटा हो । यो लगभग एक– साढे एक केजीको हुन्छ। यसमा बिभिन्न समस्या आउन सक्छ, कुनै पनि कारणले बिग्रिन सक्छ । कुनै पनि कारणले बिग्रिएर सुन्निने समस्यालाई ‘हेपाटाइटिस’ भनिन्छ । यो अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुवै हुन सक्छ । कुनै विशेष कारणवश् सात दिनदेखि दस दिनमा समस्या आएमा त्यो अल्पकालिन […]
शरीर, मन र भावनाको सन्तुलन बनाइराख्न संगीतको तालमा गरिने शारीरिक क्रियाकलाप हो नृत्य । मनोरञ्जनका रुपमा हेरिने नृत्य गर्नाले बच्चा, वयस्क तथा वृद्धको स्वास्थ्यलाई सकारात्मक असर गर्ने गुणहरु रहने योग चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । नृत्यलाई जीवनकै एक भागको रुपमा राख्दा धेरै किसिमको फाइदा आफैंलाई हुने गर्छ । नृत्यका केहि फाइदा यस्ता छन् । नृत्य गर्दा […]
सावधान ! सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन नचलाउनुहोस्
प्राय हामीलाई सुत्ने बेलामा मोबाईल प्रयोग गर्ने बानी परिसक्यो । सुत्नेबेला मोबाइल नचलाई हामी सुत्नै नसक्ने भइसकेका छौं । तर तपाईलाई राती मोबाइल प्रयोग गर्दा हुने असरबारे थहा नहुन सक्छ । रती सुत्नेबेला मोबाइल प्रयोग गर्दा हुने असरबारे आउनुहोस् जानौं : तौल बढ्ने सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले मेटाबलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । जसले […]
हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एक्लोपना फाइदाजनक कि हानीकारक ?
सामाजिक प्राणी मानिसका लागि अन्तरक्रिया र सामाजिक सम्बन्ध अपरिहार्य छ । सुखमा मिलेर मोजमस्ती गर्नु र दुखमा सामुहिक सहानुभूति नै मानिसको सामाजिक विशेषता हो तर यसको अपवादमा कोही एक्लै समय बिताउन र चाहन्छ भने त्यसलाई समाजले असामान्यरुपमा हेर्दछ । यसकारण आज एक्लोपनलाई सजायको रुपमा हेर्ने चलन हामीमाझ व्याप्त छ । आज विश्वमा एक्लोपनाका कारणले मानसिक […]
यदि तपाई आइब्रो बाक्लो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यी उपायहरु प्रयोग गर्नुहोस्
सुन्दर आइब्रोले अनुहारको सौन्दर्यतलाई बढाउने काम गर्छ । तर यदि आइब्रो पातलो छ भने त्यो सुन्दर देखिँदैन । धेरै मानिसहरु आइब्रोलाई बाक्लो बनाउन उपायको खोजीमा हुन्छन् । यदि तपाई पनि पातलो आइब्रोबाट हैरान हुनुहुन्छ भने यी उपायहरु अप्नाउनुहोस् । तपाईको आइब्रो अवश्य बाक्लो हुनेछ र तपाई त्यसलाई इच्छा अनुरुपको आकार दिनसक्नुहुन्छ । बदामको तेलले आइब्रोलाई […]
यस्ता हुन्छन् खराब र ढिला सुत्ने मानिसहरु
के तपाई सामान्य भन्दा धेरै खराब शब्द भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सधैं आफ्नो सामान कोठालाई अव्यवस्थित र फोहोर राख्नुहुन्छ ? राति ढिलो सुत्नुहुन्छ ? यदि उत्तर सकारात्मक छ भने यी सबै तपाईलाई एउटा खराब लत लागेको आभाष हुन्छ होला तर, सत्यता यो होइन । विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तर यस्ता स्वभाव भएका मानिसहरु एकदमै बुद्धिमान […]
धेरै समय एउटै आसनमा बस्दाको बेफाईदाहरु
यदि तपाई कुनै बसेर काम गर्ने पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाई सावधान हुनुहोस् । एउटा शोधको अनुसार दुई घण्टा वा त्यो भन्दा धेरै समय एउटै आसनमा बसिरहनाले असमायिक मृत्यु हुने जोखम बढ्छ । आराम गर्नका लागि बस्नु उपयुक्त मानिन्छ तर सधै बसिरहनु भने हानिकारक मानिन्छ । यदि कामको दौरान बस्नु पर्नेछ भने पनि तपाईले आफ्नो […]
भुइँमा सुत्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने फाईदाहरू
पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने प्राय धेरै मानिसहरु भुइँमा सुत्न छाडिसकेका छन् । विशेषगरी धनी परिवारका व्यक्तिहरु त झनै सुत्दैनन् । आजभोली भुइँमा सुत्न छोडिसकेको छ । बस्न र खाना खान पनि कुर्सीकै प्रयोग गर्छौं । पहिला हाम्रा पूर्खाहरू भुइँमा नै सुत्थे । तर हामी आधुनिक भनाउँदाहरू झुटो प्रतिष्ठाका लागि महंगा फर्निचर किन्छौं । दिनभरिको मेहनतपछि नरम […]
खाना नपचेको अवस्थामा अपनाउनु पर्ने घरेलु उपायहरु
खाएको कुरा नपचेर हैरान हुनुभएको छ भने घरमै यस्ता प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ : अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस् । पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ । मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिसाई खाली […]
तपाईको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि यी उद्देश्य राख्नुस्
व्यक्तित्व विकास हामीले आफ्नो जीवनमा धेरै गल्ती गरेका हुन्छौं । ती गल्तीलाई मनमा लिएर बस्ने होइन त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । आफूले चाहेको काम गर्ने आफ्नो इच्छाअनुसारको काम गरियो भने त्यो कामबाट कहिल्यै दिक्क भइँदैन । आफ्नो इच्छा के मा छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के मा आफ्नो दक्षता छ, त्यसैमा काम […]